NeChishanu, Kurume 8, 2013 Douglas Karr
Ivo vanhu veLitmus vaburitsa iyi infographic, Internet Explorer Zvichiri Pamusoro Sarudzo yeWeb-Yakavakirwa Email. Ini ndinofunga izvo zvinogara zvichishamisa kune vedu vari muindasitiri yepamhepo - avo vanonamira kuChannel neSafari, asi isu tinowanzotadza kuona kuti vatengi vedu ndevapi uye nharaunda yemakambani yavari. Apa ndipo panoshandiswa zvakanyanya IE pasina sarudzo dzakawandisa. Email nevashandisi vewebhu pasirese vanokwanisa kuwana zvimwe
Kutarisa pamusika wapfuura wemabrowser kunopa imwe nzwisiso yekuti ndiani ari kuhwina nekurasikirwa nehondo. Firefox inoenderera mberi nekukura, Safari iri kukambaira kumusoro, uye Internet Explorer iri kurasikirwa pasi. Ndinoda kutaura nezvevatatu ne 'dzidziso' dzangu dzezvinoitika. Internet Explorer Mushure mekuparadza Netscape Navigator, IE yakanyatso kuve muyero wegoridhe remambure. Bhurawuza racho raive nyore, richishanda, uye risati ratakurwa nezvose Microsoft Zvigadzirwa.